Dad ku Sumoobay Raashin ay cuneen oo la dhigay Isbitaalada Muqdisho | Wardoon
Home Somali News Dad ku Sumoobay Raashin ay cuneen oo la dhigay Isbitaalada Muqdisho
Dad ku Sumoobay Raashin ay cuneen oo la dhigay Isbitaalada Muqdisho
Isbitaalka Banaadir ee degmada Wadajir ayaa la dhigay 35 qof oo Haween iyo Caruur isugu jira kana mid ah qoysaska barakacayaasha, kuwaasoo la sheegay inay ku Sumoobeen Boorash ay hay’ad bixisay oo ay cuneen.
Guddoomiye kuxigeenka dhanka arrimaha bulshada Gobolka Banaadir Basmo Caamir Shakeeti,ayaa Warbaahinta u sheegtay in maamulkooda iyo Wasaarada Caafimaadka Soomaaliya ay iska kaashanayaan baaritaan lagu ogaanayo halka ay Caafimaad darada ka timid.
Shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayay fartay in aysan Isticmaalin Raashinka lagu kariyo Jikooyinka ama MCH-yada ku yaala Caasimada, si aysan u kordhin tirada dadka waxyeelada ay ka soo gaarto Boorashka loo qeybiyo dadka danta yar isagoo karsan.
Basmo Caamir Shakeeti ayaa dhinaca kale sheegtay in aysan garan Karin hay’ada bixisay Raashinkan lagu Sumoobay, maadaama sida ay tiri hay’ado badan ay ka howlgalaan goobaha ay ku suganyihiin dadka Barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Muqdisho.
Hay’adaha gargaarka ee dalka ka hawlgala ayaa lagu eedeeyaa inay bixiyaan Cunto waqtigeeda la dhaafay, maadaama uusan dalka dalka ka jirin Sheybaarkii lagu ogaan lahaa tayada waxa la siticmaalayo, waxaana taas ay dhibaato u keenta dadka danta yar ee ay siiyaan.
Previous articleDAAWO:-Muusoow ganacsade laweeraraa ganacsade laweeraruu leeyahay
Next articleMagaca iyo Qabiilka ninkii isku qarxiyay Wasaarada Shaqada oo shaaciyay
DAAWO:-Dibad baxayaal dalbanaya in dowladooda militariga afgambiyo +SAWIRRO
“Hirshabelle mahan Boqortooyo mana jirto cid boob ku hayso”